TENAA တွင် Hisense HLTE212T ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် Androidsis
Hisense, တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ, ငါတို့က၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအချို့ကိုသိနှင့်ပြီးသောအဘို့အသစ်တစ်ခု terminal ကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အရှေ့ ဒါဟာမော်ဒယ်အမည် HLTE212T အောက်မှာလာပါတယ်နှင့်မကြာသေးမီက၎င်းကို TENAA တွင်တွေ့ရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိန်းညှိသူနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသူမရှိသောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုတယ်လီဖုန်းအပါအ ၀ င်တိုင်းပြည်တွင်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိ။
ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာသာရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ် မကြာခင်မှာပဲသူကစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလယ်အလတ် / အနိမ့်အကွာအဝေးရှိခံနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
TENAA ဒေတာဘေ့စ်ကဖော်ပြသကဲ့သို့ HLTE212T တွင် ၅.၉၉ လက်မအရွယ် HD display တပ်ဆင်ထားပြီး 5.99 x 1.440 pixels resolution ရှိသည်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလူကြိုက်များခဲ့ပြီး ၁၈: ၉ အချိုးအစားအချိုးအစားကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကချမှတ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်တွင်တင်ဆက်မည့်စမတ်ဖုန်းသစ်များတွင်အလွန်ရောက်ရှိမည်ဟုကတိပေးသည်။
အခြားသတ်မှတ်ချက်များအရ၊ 3GB RAM တပ်ဆင်ထားသည် သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 32GB ရှိပြီး 128GB အထိ microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဒီ terminal ကိုတပ်ဆင်သောပရိုဆက်ဆာနှင့်ပတ်သက်။ , ၁.၄၀GHz quadcore အကြောင်းပြောနေတာပါ၎င်းသည် ၂၈ နာနိုမီတာရှိသော Qualcomm Snapdragon 425 သည်လျင်မြန်စွာအားသွင်း Quick Charge 28 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်ရပ်ထွက်လာရင် Adreno 2.0 GPU နဲ့လိုက်ပါသွားလိမ့်မယ်။
TENAA အတွက် Hisense HLTE212T
ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာတော့ Hisense HLTE212T တွင် LED Flash နှင့်အတူ 13MP နောက်ကင်မရာသာရှိသည်နှင့် 8MP ၏ရှေ့။ Android 7.1.2 Nougat ကိုအသုံးပြုထားပြီး 3.000mAh Battery တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်းတွင်ပင်မကင်မရာအနီးရှိလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာယခုအချိန်တွင် \_ t ဒီကိရိယာ၏ရရှိနိုင်မှု, တင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်ပစ်လွှတ်အကြောင်းကိုဘာမျှမသိ... ဒါဟာအနိုင်နိုင်ဒီအခါသမယတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကို posted စောင့်ရှောက်မည်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » TENAA တွင် Hisense HLTE212T ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်